Tag: tantara | Martech Zone
Flippies: Ny fivoaran'ny teknolojia efa an-jato taonany
Alarobia, Jona 10, 2015 Douglas Karr
Flipbooks dia iray amin'ireo endrika voalohany indrindra amin'ny antsoina ankehitriny hoe haino aman-jery mifanerasera ary nahazo patanty tany Etazonia tamin'ny taona 1882! Alefaso Flippies horonan-tsary sy sary famantarana iray, ary hanampy amin'ny famoronana sanganasa ifanakalozan-kevitra antsoin'izy ireo hoe marketing mahery vaika izy ireo. Ny kaomandy kely indrindra dia flipbook 2,500 - fa ny fomba tsara kokoa hanehoana ny vokatrao, serivisinao na marikao. Flipbooks dia manolotra fizarana hetsika brochure lehibe na fanomezana amin'ny fampisehoana varotra. Na izany
Talata, Novambra 6, 2012 Douglas Karr
Tiako ny marketing sy izay rehetra asehony. Raha ny fahitako azy dia miavaka ny marketing satria mampivondrona talenta sy anton-javatra maromaro: Ny fitondran'olombelona - maminavina ny fihetsiky ny olombelona ary mahatakatra ny zavatra tadiaviny sy ilainy izay mitarika izany fihetsika izany. Famoronana - mamorona hevitra vaovao izay tsotra sy tsara tarehy, miresaka ny fankasitrahan'ny olona ny estetika. Fanadihadiana - famakafakana ny valin'ny angon-drakitra mba hahitana fotoana hanatsarana sy hitomboan'ny valiny. Teknolojia - mampihatra
Fivoaran'ny automatisation marketing
Wednesday, May 16, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Tamin'ity taona ity dia nisy fipoahana virtoaly tao amin'ny indostrian'ny automatisation marketing. Raha ny rafitry ny automatisation marketing dia mora vidy amin'ny orinasa lehibe, mitaky loharano maro hampiharana sy hitantanana, ary sarotra ampiasaina… ny rafitra automatique marketing amin'izao fotoana izao dia tsotra, kanto ary voatsinjara ho an'ny orinasa lehibe na lehibe. Ireo mpanohana ny Marketing Automation anay ao amin'ny Right On Interactive dia nanampy anay hahatakatra ny indostria, ny tombontsoa ary ny fanovana tsy mampino mitranga.
Tantaran'ny teknolojia manakorontana amin'ny marketing
Talata, Janoary 17, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa nivoatra ny mpampita fifandraisana ary namboarina ny haitao vaovao, nianjera indostrialy maro izy ireo ary nipoaka vaovao hanoloana azy ireo. Ity infographic ity, novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa teo amin'i Eloqua sy i Jess3, dia mandalo antsika amin'ny tantara sy ireo hetsika marobe izay niteraka fiovan'ny mpivarotra. Tantaran'ny fanavaozana manakorontana ao amin'ny B2B Marketing dia mijery ny haitao fandrosoana sy ny fizotrany izay nanova mandrakizay ny ampahan'izao tontolo izao: ny fiainan'ireo matihanina amin'ny varotra B2B. Famerenana
Ny fomba haingana sy mora indrindra amin'ny fanafainganana ny tranokalanao
Talata, Aogositra 30, 2011 Alahady 19 Janoary 2014 Douglas Karr
Tamin'ny alàlan'ny mpamatsy fampiantranoana ahy, nampahafantarina ahy ny CloudFlare. Gaga be aho tamin'ny serivisy… indrindra ny vidiny fanombohana (maimaim-poana). Rehefa niasa tamina mpamatsy lehibe SaaS aho dia nanamboatra serivisy geocaching izahay ary vola an'aliny dolara isam-bolana no laninay. CloudFlare dia tsy natsangana ho an'ny mpamatsy SaaS, fa tonga lafatra ho an'ny tranonkalanao na bilaoginao. CloudFlare dia serivisy izay mampiasa teknolojia fananan-tany hampandehanana ny tranokala ho azo antoka sy haingana kokoa